Somaaliya oo Siyaasadii dibada Heer ka gaartay Tii Gudaha oo Cadow dhex Jiifo! (Qormo) – Radio Daljir
Somaaliya oo Siyaasadii dibada Heer ka gaartay Tii Gudaha oo Cadow dhex Jiifo! (Qormo)
Maarso 11, 2019 6:51 g 0
Waxaan halkan si aad u kooban kaga hadalayaa faahfaahinta u jeedka uu xanbaar sanyahay cinwaanka korku xusan. waansa araaranayaa. waxaan illaahay ka baryayaa in uu i heleeshiiyo waxa danta u ah diinteeyda dalkayga iyo dadkayga igana ilaaliyo wax intaa wax u dhimaya. Waxaan garwaaqsaday in aan ahay masuul xil iyo xaqba ka saaran yahay dhawrida diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa,kol haday sidaa tahay, waxaan gudanayaa waajibkayga wadaniyadeed.
Masuuliyadu maha uun in qofku hayo shaqo dawladeed oo loo igmaday,balse qofkastoo qaangaara rag iyo dumar waxaa saaran waajib ah in uu jeclaado dalkiisa difaacdana,oo ka ilaaliyo dalkiisa cadawga gudaha iyo ka dibada labadaba,kol haday sidaa tahay hadee waxaynu nahay kuligeen masuuliyiin xil iyo waajib saaran yahay.
Isuma sheegayno hada dalkeenu in uu ahaa mid xor ah leh karaamo iyo sharaf iyo dawladnimo laga soobilaabo 1960-1991. Waxaan wada ogsoonahay in 1991 wixii ka danbeeyay dalkeenu galay Maqanaansho dawladeed. isku dayo lasameeyay oo cali mahadi madaxweyne dalka ka noqday ayaa waxa xigay 2000 oo marlabaad lagu aas aasay dawlad kumeel gaara,taasoo kabaxday kumeel gaarnimadii 2013.
Intaa aynu ahayn dawlad la aanta,dalkeena waxaa ku socday mashruucyo guracan oo ay dawlado shisheeye gadaal ka taaganyihiin kuwaas oo aan doonayn in uu aduunka kamid ahaado dal soomaaliya layiraahdo iyo dad dawlad ah oo soomaaliyeed. waxaana xusid mudan taariikhduna qoraysaa,in intaynaan xoriyada qaadan koharba ay jireen dawlado cadaw inoo ahaa oo fikarkan qabay. Waxaase hankoodii iyo hamigoodii guracnaa jabiyay awoowyaasheen soomaaliyeed oo ka difaacay dalkeena cadawgii soo damaaciyay,iyagoo iska diiday gunimo kana doortay gobonimo iyo xornimo. Markhaati waxaa u ah waaka maanta dhulkii oo sidiisii ah aynu dhaxalay ay inoo difaaceen.
Soomaaliya kama sheekayn karo hada heerka ay joogtay kolkii dalkeena ay ka dhalatay dawlada hada jirta,siduu ahaa,dhan dhaqaale,dhan maamul,dhan sumacad dawladnimo,dhan karaamo,dhan nabad galyo,dhan kalsoonida caalamka,dhan dareenka shacabka iyo rabidiisa,dhan ciidan qaran. Arimahaas qofwalboo soomaaliyeed waa mid aan loo sheegayn balse uu ka dharagsan yahay.
Curashadii dadka soomaaliyeed aykudoorteen madaxweyne farmaajo cod aan hore loo arag iyo rabid shacab oo aan hore loo arag oo ay muujiyeen dadka soomaaliyeed gudaha iyo dibadaba,waxay ahayd taariikh xusuus reebtay 2.08.2017 waxay ahayd fariin soomaaliya ay u dirtay cadawgeedii oo ah soomaaliya dal ahaan iyo dad ahaan iyo diin ahaan iyo dawlad ahaanba waa nooshahay.Mudo aad u yar waxaynu aragnay.
*Mushaharkii shaqaalaha oo lasugay
*Dhisme ciidan qaran mushaharkoodu joogtaysanyahay
*Nidaamkii maaliyadeed oo la yaqleelay tubtoosana la marsiiyay
*Canshuurtii oo wadanigu dhiibo dakhli dalkeena usoo xerooday
*Dawladeena oo la aaminay habka dhaqaalaha ay u maarayso
*Sumacadii iyo haybadii dawladnimo ee soomaaliya oo soo ifbaxday
Marka la eego mudada iyo hawsha iyo mashaqada tiilay waa wax inbadan lagu siiyo dawlada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedba tix galin iyo bilad dahabi ah.waana mid soomaaliya maanta ku faanayso.hadana waxa soomaaliya ay higsanaysaa in mustaqbalka dhaw ay noqoto dalalka aduunka uugu hormarsan dhanka dhaqaalaha.
Intan aynu gaaray iyo xaalada dalkeena ninkii dareen fog lihi wuu arkaa in rajadeenu sarayso,nina maalin gudaheed wax walba kuma qaban karo loogamana fadhiyo taas.
Mudadaas 27 sanadoodka ah ee dalkeenu baylahda ahaa,waxaa cadawgeenii inagu dhexbeertay dad midabkeena leh,afkeena ku hadalaya,soomaali inala ah,laakiin xanbaarsan oo fulinaya hadafyada cadawga soomaaliyeed,kuwaasoo dhaafsaday jago iyo mansab iyo lacag uun. waa wax ka jira aduunyada oo dhan qofka dalkiisa jaajuusa ee u adeega dawladaha shisheeye ee cadawga u ah dalkiisa. sidaa si lamid ah dad ayaa kujira hay adaha kala duwan ee dawlada soomaaliyeed,haday tahay baarlamaan,haday tahay aqalka sare,haday tahay xukuumada,haday tahay madaxtooyada,ciidamada iyo hay adkastoo ah dawli ama ururada bulshada rayidka ah. intabadana ururada bulshada rayidka ah iyo saxaafada iyagaa toos u hogaamiya dadkaa cadawgu dhigtay oo samaystay.
Ururkasta iyo hay adkasta oo bulshada rayidka ah,shisheeyaa fangareeya sameeyayna,saxaafada loogumagacdaray saaxafada xortaha ah sirdoon dalal cadaw inoo ah ayaa iska leh oo maal gashaday. saxaafadaasi way kamadaxbanaan yihiin dawlada soomaaliyeed iyo u adeega danaha dalka soomaaliya.
Waxaa jira rag dawlada soomaaliyeed kasoo qabtay heer madaxweyne,rag ah xildhibaano iyo rag xil kasoo qabtay dalkeena oo ah siyaasiyiin,waxay isu ekaysiiyaan in ay mucaarad yihiin,waxay iska dhigaan mucaarad. laakiin dhab ahaan waa niman u adeegaya danaha dawlado shisheeye,waxayna cod hoose iyo mid dheerba ku sheegan arimaha lidiga ku ah geedi socodka soomaaliya oo lugaheeda ku istaagta. Tusaale ahaan marka dawlada soomaaliya gar iyo gardaraba ay is qabtaan wadamada dunida dal kamid ah,sida Ethiopia iyo Emaraat iyo sucuudiga iyo iiraan iyo dalkasta, dalalkaa siyaasiyiintoodu waxay meel kawada istaagaan qadiyada dalkooda oo xoojiyaan dawladooda shacabkana tusaan dawladnimada iyo wadaniyada.
Ma,arkaysid siyaasiyiinta emaraatka iyo shacabkooda oo leh soomaaliya saxsan dawladeenu waa khaldantahay ,kuwa ethiopia sidoo kale kuwa kenya sidoo kale. sucuudiga sidoo kale,kuwa yemen sidoo kale dalkasta fiiri. inaguna dalkeenu waa mid aynu wada ognahay xaaladiisa oo wali gacanba inooguma jiro in aan xuduudiisa sugno,waxa socdaa waa nabadayn iyo geedi socod dawladnimo.
Nimankan caadada kayeeshay in ay horistaagaan in soomaaliya dawladi ka dhalato,oo qabyaalad iyo kicin shacab iyo soomaalida oo lakala fogeeyo kashaqaynaya,ee lasafahan marwalba cadawga qarankeena iyo dhulkeena duulanka ku ah maha mucaarad waa cadaw ka xun oo ka fog cadawgeena muuqda.
Dawladan hada dadaalaysa waxay ka gaabisay hawlaha uugu waa weyn marka dal dib loo dhisayo oo uu burburo sideena oo kale,oo ah in cadawga gudaha ee inagu dhex jira lasugo. Niman sugin cadawga gudaha ee aan kor ku xusay waanin geedo sare waabaya weeye. kuwa u shaqeeya cadawga xarigmaha dilweeye.waxaa hubaal ah kuwa sheegta siyaasiyiinta ee mucaaradka iska dhigayaa iyo kuwan afka duuban in halmeel laga wada xukumo,waxaana ka dhexeeye wada shaqan buuxda hadaad u fiirsataan oo daba gashaan. nimankaa afka duuban maxaa miis wada fadhiisiyay!! mucaaradka?
Dadka waxa laaya hadana baroortaa waa iyaga uun,dawladu arimaha gudaha waa ku dhici la dahay waxaana adeeganaya ragii shisheeyaha inagu dhexbeertay oo ah dabadhilif qaran. dadka soomaaliyeed laguma khaldi karo mucaarad iyo daba dhilif waa laba kala dheer oo aan aragno.ninka dawladaha shisheeye lasafan ee dawladii iyo dalkii soomaaliyeed la raba hooga iyo halaaga kaasi mucaarad maha waa cadaw dawadiisu tahay tiirka si dalku ubadbaado dawladnimaduna u hanaqaado.
Nabadsugida soomaaliyeed masugto cadawga gudaha!mana daba gasho kuwa siyaasada kula jira faraha kuna xiran dawladaha shisheeye iyo kuwa ka agdhaw labadaba,taasi iyagay utahay waji gabax waa in dagdag wax looga qabtaa. shacabka soomaaliyeed waa lagu dhexjiraa waana la jahawareerinayaa iyadoo qabiil loogu soo gabanaayo guud ahaan soomaaliya.dad yar oo kooban ayaa dalkeena ku dhex jira waa in lasugaa dadkaas la garaanaayo.
Dalkastaa lugihiisa kuma istaago dawladna ma noqdo ilaa uu hubsado,cadawga shisheeye u adeegaaya ee gudaha dhex jiifa.Ruushka eeg,ruwandha eeg,kaliya waxaa la ugaarsaday oo lasifeeyay cadawgii gudaha markaasaa dawladnimadii hana qaaday. dad yar oo siyaasiyiin sheeganaya ayaa hortaagan in soomaaliya ay dawlad ka dhalato.dhanka kale waxaan doonayno ayaa ah soomaaliya oo ah dawlad,leh nidaam iyo kala danbayn,tana in loo dhintay rabtaa hadal kuma timaado.
qabiil waa maxay? looma baahna maadaama aan nahay isku isir isku diin isku af isku dad iyo isku dal anagoo soomaali ah ayaan rabnaa in dalkeena aan ilaashano cadawga gudaha ka difaacano iyo kan dibadaba.qofkastoo soomaaliyeed xilbaa saaran oo kasaaran dalkiisa.Dawlad leh awood ay ku illaaliso xudeeda mahaysto iyo dawladnimaan mucaaradi meel ma wada gasho,maanta soomaaliya siday tahay marka dhab ahaan aad eegto looma baahna mucaarad sidii dal dhisan oo amaankiisu sugan yahay oo kale.
dalkeena majiro mucaarad laakiin dabadhilif cadaw ah ayaa jira oo inoo diidan in aan dawlad ahaano.
W/Q Yuusuf Cumar
Madaxweyne Farmaajo oo ka qaybgalaya shirka Kampala ee nabadda, isdhexgalka iyo kobcinta dhaqaalaha Afrika